Accueil » Chronique » Ranobe mangeniheny
Avy ny orana, aina ny rano. Teo Ikopa efa natahorana ho maito. Izao mba mahazo aina avokoa ry Varahina sy Ivovoka ary Ampasimbe ho tonga namana aminy, alohan’ny etsy Tanjombato. Eo mantsy, mampanahy raha vao mitranga ireto vatovato maha riana ny riaka, sanatria ka nofo mahia miraniràny taolana.
Tapaky ny volana janoary, tamin’ny taon-dasa, nisesisesy tahaka izao volana febroary 2021 izao koa ny orana. Tamin’ny 2015, voalohandohan’ny volana marsa no nirotsaka natevina ary naharitra : 6.339 hektara ny tanimbary dibo-drano taty Afovoantany anefa main-tany tany Atsimon’ny Nosy. Aleo ihany aloha, orana mamonto ny tany toy izay tany efitra fasipasika tsy misy tombohina angady.
Mampalahelo anefa mahita ity rano, mbola hotsiriritina Asara, very fotsiny an-tatatra, mivarina ho ony dia afoy an-dranomasina. Io lokom-potaka io no naha Ikopa an’Ikopa : havan’ny teny indoneziana «Ku-kup» midika hoe «fotaka» na «lompotra», hita amin’ny anarana «Kuala Lumpur», ilay Ankoalan-dompotra any Malayzia. Ranom-potaka avy any Andrainarivo, mirotsaka matevina eny Besarety, mibosesika ho any Andravoahangy, tsy kely lalana hamonjy an’Andriantany dia hanamavo ny reniranon’Ikopa izay hivarina ao Betsibo-i-ka.
Ny fotaka manentsina ny seranana ao Mahajanga, ireny nofon-tany rehetra niendaka tamin’ny vohitr’Imerina ireny, vokatry ny doro-tanety sy fandripahana ala. Rehefa lasa fotaka ny tany dia ireny miforona ireny ny «Lavaka», mampalahelo fa isan’ny teny gasy vitsy tafiditra amin’ny Rakibolana iraisam-pirenena. Tsy mila hoby, tsy mitady tehaka, fa vay an-kandrina, sady marary no mahamenatra.
Orana tokony hivalampatra telo volana, mitosaka tapa-bolana. Ny tany tokony hitsentsitra ny ranon’orana, tapitra natao «béton» sy «goudron». Raha izao anefa no nanamboatra farihy anelanelan’Alasora sy Imerimanjaka, na teny Amoron’Ankona, na tetsy Laniera : Ranobe mangeniheny, Mantasoa ampototr’i Mahazoarivo sy Ambohipeno, Alaotra ambodin’ Ambohidroa-Ambohijanahary, Itasy tazanina avy eny Amboatany. Farihy, tobin-drano. Farihy, ho lakanina hitsangatsanganana.
Farihy, hanamando ny rivotra rehefa iny migaingaina iny ny Masoandro. Fa tsy azo antsakaina mantsy ny «bypass» sy ny «rocade» ary ny «autoroute». Farihy, dobo, kamory. Zahatra, hono, no nitondra an-dRanavalontsimitoviaminandriana, anabavin’Andriamasinavalona, nampitohy an’Alasora sy Anosimanjaka. Ary ny lakam-piara misy fanarina ? Mba ho hitan’ny taranaka tahaka izay nataon’ny Razamben-dry Andrianerinerina, Andriandravindravina, Andrianoranorana, Andriandranolava, Andriamoraony… Mbola misy arivo hitsingerina, hanofisana ilay Ranobe mangeniheny.
DREDD Vakinankaratra – Engagement sur la tolérance zéro